गोकुल जि !
तितो यथार्त लेख्नु भो ।
" हाम्रा बा - आमाका कुटो कोदालोहरु फेरिएनन । राजनीति गर्ने का घर हरुमा नोकर चाकर फेरिए ----"
हिर्दय छोयो लेख ले । निरन्तर लेखिरहनु होस् सम साम यिक तिक्तता लाई उदाङो पर्दै शुभ कामना ।
तपाईंका शब्द शब्दले हिर्दय छोयो, आफु नेपाली भएकोले एकपटक नराम्रोसँग मन दुखेर आयो अनी यो वास्तविकता सँग डर पनि लाग्यो। समसामायिक यथार्थलाई प्रस्तुत गर्नु भएकोले साह्रै खुशी लाग्यो। निरन्तरता को शुभकामना ।
लुनाजी, प्रबिणजी, मुरी मुरी धन्यवाद सुझाब्को लागि । तपाईंहरुको प्रेरणाले फेरी केही अबश्य लेखुला । तर मलाई यहाँ एउटा कुरो कोट्टाउन मन लाग्यो । कुरो के भने ; माथिको लेख मैले १० दिन अगाडि यसो कोरेको थिए अनी लएको थियो आफ्नै ब्लगमा मात्रै राखु । तर यसो सोचे होइन दौतरिमा पठाउछु । तर किन हो किन मैले माइ संसारमा पथाएको थिए, ८ दिन अगाडि । एउटा सफल ब्यापारिले किराना पसलेलाई हेपे जसरी भनुम या किन हो सफल ब्लगर उमेशजिले ठाउँ दिनु भएन । शायद अनुपयुक्त लाग्यो होला - उहालाई । खैर केही छैन । भनिन्छ नि, जब मान्छेले मान्छेलाई नै स्थान दिदैनन नि तब मान्छेले मान्छे हुने स्थान खोज्छ । फलस्वरुप, कम्प्युटरमा पोख्त नभए'नी आज आँफैले ब्लगको बाटो रोजेको छु, हेर्दै जाउ पछी के हुनेछ।
त्यसपछी मैले बल्ल दौतरिमा पठाएँ । स्थान दिनुभएकोमा दौतरी प्रती आभारी छु ।
गोकुलजी, "जब मान्छेले मान्छेलाई नै स्थान दिदैन नि तब शायद मान्छेले मान्छे हुने स्थान खोज्छ" भने जस्तै त्यसैले होला हामी पनि "मान्छे" बन्न परदेशिएका छौं !
वास्तवमा नि हाम्रो देशको राजनीतिबाट "नीति" बढारिनुमा भाषण भट्टयाउन सक्नेलाई "नेता" मान्ने र जसले भट्टयाउन सक्छ उसैलाइ भोट दिने परिपाटि पनि कम जिम्मेवार छैन । अलिकति विकास हुन लागेका र भइसकेका मुलुकतिर "बोल्ने" लाई भन्दा "गर्ने" लाई विश्वास गरिन्छ । हाम्रो तिर भाषण गर्न जानेन भने नेता भइदैन, काम गर्ने मान्छेले नेतृत्व गर्न पाउने हैन बरु "कमारो" भएर बस्नु पर्छ । अरु देशमा केहि कुरा नया गर्न सक्ने मान्छे र आविश्कार गर्न सक्ने मान्छे अगाडि बढे, हाम्रो देशमा बर्बराउन जान्ने वा बोल्न जान्ने मात्र अगाडी बढे । हाम्रा गाउं छिमेकका, घरका मान्छेलाई "बर्बराउने" हरुको छाया बाट र "भ्रम" बाट मुक्त राख्न सके मात्रै पनि हाम्रो देश केहि बन्थ्यो कि !
त्यसैले गिरिजा देखि कामरेड क्रमभंगसम्म सबैले केहि फरक अनुभुति दिन सकेनन ।
" जब मान्छेले मान्छेलाई नै स्थान दिदैन नि तब मान्छेले मान्छे हुने स्थान खोज्छ ---" गोकुल जि ! तपाईंको यो हिर्दय दु खाइ मा इख छ । भन्छन नि " सर्प मा बिख र मान्छेमा इख " नभए त्यसको औचित्य हुँदैन रे !
प्रगती गर्नुहोस् शुभ कामना ।